राज्यको स्तुतिगान | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
भीडहरूले मेरो जयजयकार गर्छन्, भीडहरूले मेरो प्रशंसा गर्छन्; सबै मुखले एउटै साँचो परमेश्‍वरको नाउँ लिन्छन्, सबै मानिसहरूले मेरा कामहरू हेर्न आ-आफ्नो आँखा माथि उठाउँछन्। परमेश्‍वरको राज्य मानिसहरूको संसारमा ओर्लिन्छ, मेरो व्यक्ति धनी र प्रशस्त छ। यसमा को आनन्दित हुँदैन र? आनन्दले को नाच्दैन? ए, सियोन! ममा हर्षोल्‍लास गर्न तेरो विजयको झन्डा उठा! मेरो पवित्र नाउँलाई फैलाउन तेरो विजयको गीत गा! पृथ्वीको अन्त्यसम्‍मका सबै सृष्टि! आफैलाई शुद्ध पार्न हतार गर, यसैले कि तिमीहरू मेरो निम्ति बलि बन्न सक। माथि आकाशमा तारा मण्डलहरू! आकाशमा मेरो पराक्रमी शक्ति प्रकट गर्न आफ्‍नो स्थानमा तुरुन्तै फर्किहाल। म पृथ्वीका मानिसहरूका आवाज सुन्न मेरो कान थाप्छु, जसले गीतमा मेरो निम्ति आफ्नो असिम प्रेम र सम्मान खन्याउँछन्। यस दिन, जब सबै सृष्टिहरू जीवनमा फर्कन्छन्, म मानिसहरूको संसारमा ओर्लिन्छु। यो क्षणमा, यस बेला, सबै फूलहरू उन्मत्त बनेर फक्रँदै फक्रिन्छन्, सबै पक्षीहरू एकै सोरमा गाउँछन्, सबै थोक आनन्दले धड्कन्छन्। परमेश्‍वरको राज्यको सलामीको आवाजमा, शैतानको राज्य ढल्छ, राज्यको स्तुतिगानको गर्जनमा कहिल्यै नउठ्ने गरी नाश हुन्छ।
पृथ्वीमा कसले खडा हुने र विरोध गर्ने हिम्मत गर्छ? जब म पृथ्वीमा ओर्लिन्छु, म आगो ल्याउँछु, क्रोध ल्याउँछु, र हरकिसिमका प्राकृतिक विपत्तिहरू ल्याउँछु। अहिले सांसारिक राज्यहरू मेरो राज्य हुन्! माथि आकाशमा, बादलहरू छताछुल्ल र तरङ्गित हुन्छन्; आकाशमुनि, ताल र नदीहरू उर्लेर बढ्छन् र खुसीको साथ एक उत्तेजक धुन निकाल्छन्। विश्राम गरिरहेका जनावरहरू उनीहरूका ओडारहरूबाट निस्किन्छन्, र सबै मानिसहरू मद्वारा उनीहरूको निद्राबाट जगाइन्छन्। असङ्ख्य मानिसहरूले पर्खेका दिन आखिरमा आइपुगेको छ! तिनीहरूले आफ्ना सबैभन्दा सुन्दर गीतहरू मलाई चढाउँछन्।
यो सुन्दर क्षणमा, यो आनन्दको समयमा,
चारैतिर प्रशंसा गुञ्‍जिन्छ, माथि आकाशमा अनि तल पृथ्वीमा। यसमा को उत्साहित हुँदैन र?
कसको हृदय फुरुङ्ग हुँदैन र? यो दृश्यमा रुने को छैन र?
आकाश पुरानो समयको आकाश होइन, अब यो परमेश्‍वरको राज्यको आकाश हो।
पृथ्वी त्यो पृथ्वी होइन जुन पहिले थियो, अब त यो पवित्र भूमि हो।
ठूलो वर्षा बितिसकेपछि, त्यो फोहोर पुरानो संसार पूर्ण रूपमा नयाँ बनाइएको छ।
पर्वतहरू परिवर्तन हुँदैछन् … समुद्रहरू परिवर्तन हुँदैछन् …
मानिसहरू पनि परिवर्तन हुँदैछन् … सबै थोकहरू परिवर्तन हुँदैछन्…।
हे, तिमी मौन पर्वतहरू हो! उठ र मेरो लागि नाच!
हे, तिमी शान्त समुद्र हो, स्वतन्त्र रूपमा बग्दै जाओ!
सपना देख्ने मानिसहरू हो! बिउँझ र पछि लाग!
म आएको छु … म राजा हुँ…।
सबै मानव जातिले तिनीहरूका आँखाले मेरो अनुहार देख्नेछन्, र तिनीहरूको कानले मेरो आवाज सुन्नेछन्,
आफ्नै लागि परमेश्‍वरको राज्यको जीवन जिउनेछन्…।
कस्तो मीठो … कति सुन्दर…।
अविस्मरणीय … बिर्सनु असम्भव…।
मेरो क्रोध दन्किँदा ठूलो रातो अजिङ्गरले संघर्ष गर्दछ;
मेरो राजसी न्यायमा, दियाबलसहरूले तिनीहरूको आफ्नो वास्तविक रूपहरू देखाउँछन्;
मेरा कठोर वचनहरूमा, सबै मानिसहरूले गहिरो लाज महसुस गर्दछन्, र आफूलाई लुकाउने ठाउँ कहीँ पाउनेछैनन्।
तिनीहरूले विगतलाई सम्झन्छन्, तिनीहरूले कसरी मेरो उपहास गरेथे, र मेरो खिल्ली उडाएका थिए।
तिनीहरूले आफैलाई प्रदर्शन नगरेको, कुनै समय थिएन, तिनीहरूले मलाई चुनौती नदिएको कुनै समय थिएन।
आज, को रुँदैन? कसलाई पछितो लाग्दैन?
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको संसार रोदनले भरिएको छ …
आनन्दको आवाजहरूले भरिएको … हाँसोका आवाजहरूले भरिएको…।
अतुलनीय आनन्द … तुलना गर्नै नसकिने खुसी…।
एक सानो वर्षाले पटटट गर्दैछ … हिउँका गह्रौं टुक्राहरू फुरुरु चल्दैछन्…।
मानिसहरूभित्र, दु:ख र आनन्द आपसमा मिसिंदैछन् … कोही हाँस्दैछन् …
कोही सुँक्कसुँक्क गर्दैछन् … कोही आनन्द मनाइरहेका छन्…।
मानौं, सबैले बिर्सेका छन् … यो वर्षा र बादलहरू सहितको वसन्त हो कि,
फूलहरू फक्रिरहेको ग्रीष्म, प्रशस्त फसलहरूको शरद ऋतु हो,
वा तुसारो र हिउँजस्तो चिसो हिउँद हो, सो कसैले जान्दैन…।
आकाशमा बादलहरू बग्दैछन्, पृथ्वीमा समुद्रहरू घोलिएर धमिलिँदैछन्।
छोराहरूले आफ्ना पाखुरा हल्लाउँछन् … मानिसहरू नाच्नका निम्ति आफ्ना खुट्टाहरू चलाउँछन्…।
स्वर्गदूतहरूले काम गर्दैछन् … स्वर्गदूतहरू गोठालो गरिरहेका छन्…।
पृथ्वीमा मानिसहरू सबै दौडधूप गरिरहेका छन्, र पृथ्वीमा सबै थोकहरू वृद्धि हुन्छन्।
अघिल्लो: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय १०
अर्को: सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरू—अध्याय १२
अनुग्रहको युगमा पश्‍चात्तापको सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो, अनि मानिसले त्यसमा विश्‍वास गर्‍यो भने उसले मुक्तिपाउँथ्यो। आज, मुक्तिको सट्टामा...